Sahan dhaqanka way xiran yihiin, caajiso, oo laga saaray nolosha. Hadda waxaan weydiin kartaa su'aalo dheeraad ah oo gundhig nolosha, furan, iyo xiiso badan.
Wadarta qaab qalad sahan dhiiri cilmi in aad ka fikirto cilmi sahan sida habka laba qayb ka mid ah: qoranayaan soo jawaabay oo wax weyddiinaya. In qaybta hore waxaan kala hadlay sida da'da digital badala sida aan u qortaan soo jawaabay, iyo hadda waxaan kala hadli doonaa sida da'da digital awood habab cusub oo su'aalo weydiiso. Kuwani habab cusub oo loo isticmaali karaa midkood tijaabada ixtimaalka ama baarka aan jaaniska.
Hab Baadhitaan waa deegaanka, taas oo su'aalaha lagu weydiiyo, oo waxay yeelan kartaa saamayn muhiim ah oo ku saabsan cabbirka (Couper 2011) . Ayado hore ee cilmi sahan hab ugu badan wuxuu ahaa weji-ka-fool, iyo marxalad labaad hab ugu badan ahaa telefoonka. cilmi badan waxay u arkaan Zaman saddexaad ee cilmi sahan sida kaliya ballaarinta ah hababka sahan in ka mid ah kombiyuutarada iyo telefoonada gacanta. Si kastaba ha ahaatee, da'da digital waa ka badan isbedel ku tuubooyinka kaas oo su'aalaha iyo jawaabaha soo qulquli. Halkii, guurka ka analoogga si digital awood-iyo-tahay u baahan cilmi doonaa in la beddelo sida aynu weyddiisanno.
Baadhitaan ay sameeyeen Michael Schober iyo asxaabtii muujinayaa faa'iidooyinka qabsado naga codsanaya in awoodaha iyo caadooyinka bulshada ku xeeran teknoolajiyada cusub (Schober et al. 2015) . In daraasadda, Schober iyo asxaabtii la barbardhigo hababka kala duwan ee dadka waydiinaya su'aalo via mobile phone a. Waxay la barbar dhigo wada hadalka cod, taas oo ay noqon lahaayeen kuwa turjumaad dabiiciga ah wajiyadii Zaman labaad, in ururinta xogta via fariimaha qoraalka badan, hab aan lahayn tusaale cad. Schober iyo shaqaalaheeda lagu ogaaday in qoraalka keentay in xogta tayada sare ka badan waraysiyada cod. In si kale loo dhigo, si fudud wareejinta hababka jir ah u gal teknoolajiyada cusub ma ahaa hab ugu fiican. Saas ma aha, cilmi yeelan doonaan in ay siyaabo noo of weydiinaya in ay kuwan dhufto ee cusub astaysto.
Waxaa jira cabbir badan oo ku teedsan oo cilmi guraan karaa qaabab baadhitaan, laakiin feature ugu muhiimsan ee hababka sahan da'da digital waa in ay yihiin computer-maamula, halkii ay ku waraysanaya-maamusho (sida telefoonka iyo sahan fool-ka-fool ah). Qaadashada waraysanaysa aadanaha ka mid ah geedi socodka ururinta macluumaadka waxay bixisaa faa'iidooyinka aadka u badan iyo qaar ka mid ah barayaa cillado. In la eego faa'iidooyinka, ay ka saareen waraysanaysa u xuub-yaraynaysaa kharashka-waraysiyo waa mid ka mid ah kharashka ugu weyn baadhitaan cilmi-iyo kordhiyaa dabacsanaan, jawaabaha ka qayb qaadan kartaa marka ay doonayaan, ma aha oo kaliya marka waraysanaya ah waxaa laga heli karaa. Si kastaba ha ahaatee, ay ka saareen ku waraysanaya sidoo kale xaddidaya sahan siyaabo qaar ka mid ah. Gaar ahaan, waraysanaysa waa muhiim u ah dhiiri jawaabeyaasha inay ka qaybgalaan oo lagu hayo iyaga ku hawlan halka iyada oo sahan dheer oo mararka qaarkood daalin slogging.
Next, waxaan ku tilmaami doonaa laba waji oo muujinaya sida cilmi faaiidaysan karaan qalabka da'da digital su'aalaha kala duwan weydiin: qiyaaso dalalka gudaha waqti dheeraad ah oo ku haboon oo meel marayo qiimaynta daqiiqad dhawrista (Qaybta 3.5.1) oo isku awooda su'aalo sahan furan oo ku dhow-dheeryahay iyada oo sahan-Leaks (Qaybta 3.5.2). Si kastaba ha ahaatee, dhaqaaqo xagga computer-maamula, weydiinta xoojisay sidoo kale ka dhigan tahay in aan u baahanahay in la qorsheeyo jidadka weydiinta in badan yihiin raaxo u leh ka qayb-galayaasha, habka loo yaqaan gamification (Qaybta 3.5.3).